musha nyika dzakabatana Singers Snoop Imbwa Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemuAmerican Celeb ane zita rekuti "Snoopy". Yedu Snoop Imbwa Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake yakasununguka-yakadzoserwa dhirivhari kuendesa uye nhetembo dzemimhanzi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Snoop Dogg's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Snoop Imbwa Yekutanga Upenyu uye Mhuri Yemashure:
Kutanga kuenda, Calvin Cordozar Broadus Jr akazvarwa pazuva re20th muna Gumiguru 1971 kuLong Beach, muCalifornia, US Akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Beverly Broadus Green nababa vake, Vernell Varnado.
Nyika yeAmerica yerudzi rwevatema nemidzi yeAfro-America yaive nemwedzi mitatu yekuzvarwa baba vake - Vernell paakasiya mhuri. Nekuda kweizvozvo, Snoop akarererwa naamai vake muCalifornia kwaakakurira pamwe chete nehama dzemadzimai ehama - Jerry Wesley Carter naBing Worthington Jr.
Kukura muCalifornia, mudiki Snoop aive mwana ane hukama aive nehutano hwakanaka hwepakutanga. Mukuwedzera, iye akazivikanwa kuva anoda katuni uye anofarira nezvehunyanzvi. Panguva yakazosvika Snoop pazera, akatanga kuimba nekutamba piyano kuGolgotha ​​Trinity Baptist Church uko kwaakatanga kuve nerudo rwemimhanzi.
Snoop Imbwa Dzidzo uye Basa Rokuvaka:
Snoop Imbwa Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi: Dzidzo uye Basa Rekuvaka
Snoop yedzidzo kumashure inosanganisira zvidzidzo zvake kuLong Beach Polytechnic High Chikoro muCalifornia, US. Ndichiri kuchikoro, Snoop akaita shanduko yakajeka kubva pakuimba nziyo dzeevhangeri kuenda kubhodhi pagiredhi rechitanhatu.
Iyo nguva zvakare yakaona Snoop akatandara nemakororo pasina kuve iyeyeyechokwadi nhengo yechero gang panguva iyoyo. Nekudaro, kusonganirana kwake nezvinhu zvekuti ini ndinoremekedzwa zvakabiwa pahunhu hwake zvichitungamira mukubatanidzwa kwake mukutengesa zvinodhaka asati apedza chikoro chesekondari.
Snoop Imbwa Yekutanga Basa Rehupenyu:
Pasina chinguva Snoop apedza chikoro chesekondari, akazova mutungamiriri wekusapindirana kwemisangano uye akaiswa mutorongo munzvimbo dzinoverengeka dzekururamisa kusanganisira Wayside jeri. Kwete mumwe wekudzvinyirira matarenda ake, Snoop akaimba nekuseri kwechirevo kune kutaurwa kwakanaka kwevasungwa avo vakamukurudzira kuti arege hupenyu hwehutsotsi uye kutarisa mumhanzi.
“Kurutivi rwenzira yejeri, ndakateerera nyaya dzaitaurwa nevamwe vasungwa, ndokuzvinyora papepa rangu rekunyora ndokudzishandura kuva raps…. kwakauya vasungwa vakuru avo vaiwanzo kunditora padivi kuti, 'Jaya, haufanire kunge uri munzvimbo ino. Mwari vakupa tarenda, rishandise zvakanaka. '”
Kuzeya Imbwa Road To Fame Nhau:
Achiteerera kuraira, Snoop akaunganidza zviito zvake pamwe ndokutanga kurekodha imba yakasununguka nevazukuru vake pasi pezita reboka 213. Mumwe weSnoop's solo freestyle pamusoro peEn Vogue's "Hold On" yakasvika kumugadziri ane mukurumbira Dr Dre uyo akafadzwa uye akashanda naye pa debut solo album, 'Iyo Isingaperi'.
Snoop's ficha pane Dre's 'Iyo Isingaperi' yakamuunza padhuze nemukurumbira nevazhinji kutarisira album kubva panguva iyoyo-newbie. Snoop achishanda paarubhamu yake yekutanga, akaiswa muchidimbu mumhosva yekuponda mushure mekunge murindi wake, Malik (McKinley Lee), apfura murume anonzi Philip Woldermariam kaviri kubva pachigaro cheJeep icho Snoop aityaira.
Snoop Imbwa Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Snoop akazvishandura kuva mapurisa uye akaburitswa pachibvumirano chemadhora miriyoni imwe. Akaenderera mberi nekupedzisa basa padambarefu rake raitarisirwa kwazvo 'Dogg ¥ $ tyle' iyo yakaburitswa mu1 uye yakakwira nzira yese kuenda kunhamba yemutambo pamabhodhi epamusoro 1993 eBill board. Vanozivikanwa pakati pemaalbum singles vaive "Ndiri ani (Ndini Zita Rangu)?" pamwe ne "Gin neJuice" izvo zvakapa vateveri kunzwa kwehip hop iyo yaizonzwika mupfungwa dzavo kwezvizvarwa.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Snoop anoenderera mberi nekutengesa kwake muindastiri yemimhanzi neakadhonzwa, laconic rhyming maitiro. Yake yazvino uye yechi17 album "Ini ndoda kunditenda" yakaburitswa mu2019 uye haina kutadza pane vateveri kutarisira. Zvakawanda zvinopa mubayiro kumakore gumi eSnoop kwenguva refu mumimhanzi isimba rakadzika midzi raanaro muhip hop yepasirose sezviri pachena mumabhuku ekubatana aakambove nawo nevanozivikanwa maartist mumakore apfuura.
Snoop Imbwa Hukama Hupenyu:
Snoop Dogg akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yewanano hupenyu. Kutanga nenhoroondo yekufambidzana yaSnoop, yekutanga rekodhi yekudanana kwake yakadzokera ku1996 paakange aine stint naLaurie Holmond zvakatungamira mukuzvarwa kwemwanakomana wake wekutanga Julian Corrie.
Achienderera mberi, Iyo muchengeti akaroora kune mwana wake mukuru chikoro Shante Broadus gore rakatevera mu1997 uye akaenderera kunogara vatema vaviri vavariro naye kusvika muchato wavo wakarova mabumps zvakapotsa zvaita kuti varambane mu2004. Ivo duo vanoyananisa uye vanoramba vakaroora panguva yekunyora. Muchato wavo wakakomborerwa nevana vatatu. Ivo vanosanganisira vanakomana vaviri Cordé naCordell uye mwanasikana Cori.
Snoop Dogg nemukadzi wake nevana vatatu- Vanosanganisira vaviri vanakomana Cordé naCordell pamwe nemwanasikana Cori.
Snoop Imbwa Hupenyu hwemhuri:
Snoop Dogg chikamu chemuti wakapfuma uye wakakurumbira wemhuri kunyangwe uchiuya wakabva kumhuri yepasi-yemhuri mhuri. Isu tinofumura hupenyu hwemhuri yake pazasi.
Nezve baba vaSnoop Dogg:
Vernell Varnado ndibaba vaSnoop. Iye akazvarwa pazuva re13th raDecember 1949 uye akashanda seVeteran veteran, muimbi uye anotakura tsamba. Kunyangwe Vernell akasiya Snoop naamai vake apo aingova nemwedzi mitatu chete, akasanganazve nemuimbi makore mazhinji gare gare uye ikozvino akagovana hukama hwepedyo naye nevazukuru vake.
Nezve amai vaSnoop Dogg:
Beverly Broadus Green ndiamai vaSnoop. Akaroora Calvin Cordozar Broadus Sr Pasina nguva refu baba vaSnoop vasiya mhuri ndokutumidza mudiki Snoop zita rake. Amai vanotsigira avo vakapedza makumi emakore vachiimba mukwaya yechechi vakagadzwa kuva gurukota muna 2005. Asides ari muevhangeri, Beverly munyori nebasa rake rinozivikanwa kuve "Rudo Rwechipiri II: Iyo Nyaya Yemukadzi Anoshamisa" (2014).
Nezve hama dzaSnoop Dogg:
Snoop haana hama dzekubereka uye haana hanzvadzi asi vaviri-hama-dzakazvarwa kuna amai vake kubva kuzvinhu zviviri. Ivo vanosanganisira Jerry Wesley Carter, mukuru mukoma munin'ina mukoma akazvarwa kuna amai vaSnoop kubva pakudanana kwake nemufambisi wengarava Harold Carter pamwe naBing Worthington Jr, munin'ina-mukoma-munin'ina akaberekwa muhukama hwaamai vake naBing Crosby Worthington Sr.
Hazvisi kupokana kuti Snoop Dogg ane hukama hwakawanda hunogadzirira chero chaanoshaya mumhuri yake yepedyo. Vanozivikanwa pakati penhengo dzemhuri dziri kure vaive vanasekuru vababa vake William Varnado naMinnie Felder pamwe nasekuru vake amai vake uye muzukuru Dorothy Dean Martin naJeremiah Tate. Vazukuru vake vakasimbiswa mutsimba Sasha Banks, vaR $ B vaimbi Brandy naRay J uye mugadziri werekodhi Dax Dillinger. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaSnoop nasekuru natete panguva yekunyora apa vana babamunini vake nanasekuru vasati vazozivikanwa.
Snoop Imbwa Yega Hupenyu:
Snoop Dogg ane hunhu hunoshamisa hunobatanidza maLibra Zodiac hunhu neake akasarudzika munhu wekutonhorera-musoro uye akaradzikwa kumashure. Chii chimwe? anotsvaga kuziva, akaenzanirana uye akarondedzerwa nevazhinji sekusava nehanya.
Kure kubva kune yekusaka inoda basa rekunyora nziyo uye kurekodha, Snoop ine zvido nezvivaraidzo zvinosanganisira kutarisa mabhaisikopo, kuteerera mimhanzi, uye kuramba uine huwandu hwakawanda hwemitambo inosanganisira basketball, baseball, wrestling uye bhishi.
Snoop Dogg Mararamiro:
Snoop Dogg ine mutengo unofungidzirwa unodarika $ 135 Million panguva yekunyora. Nzvimbo dzepfuma yake inoshamisa dzinotora kwadzinobva kubva mumimhanzi yake kuedza uye kupedzisa zviitiko. Nekudaro, muimbi ane akakura kwazvo zvemari inotsigira mari yake yakawandisa kuwana zvinhu zvekutanga nezvinhu.
Inokosha pakati pezvinhu zvakawanda izvo Vanotaura zvakanaka nezve hupenyu hwoumbozha hwaSnoop imba yake yemamirioni-emadhora muDiamond Bar, California. Iyo mall inodada yemakamuri e Deluxe uye maficha anoita kuti Snoop nemhuri yake vararame hupenyu hunonakidza huzere hupenyu. Iye anozivikanwa zvakare kuve nemutengo wemotokari unodhura unosanganisira kukwira seDodge Challenger, Polaris Slingshot, Cadillac Escalade, 1967 Cadillac Deville pakati pevamwe.
Snoop Dogg Untold Chokwadi:
Yedu Snoop Dogg nyaya yehudiki uye biography yaisazove isina kukwana kunze kwekutsanangura zvisinganyatso-kuzivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezvake tinokuunzira zvimwe zvezvokwadi.
Amai vaSnoop Dogg vakamutumidza zita rekuti "Snoopy" nekuda kwechitarisiko chake uye nerudo rwemunhu wekatuni "Snoopy" wePeanut. Sezvo makore aifambira mberi, "Snoopy" yakapfupikiswa kuti "Snoop" nepo "Dogg" ichiwedzerwa kupa zita renhandare "Snoop Dogg".
Kufunga uye KUSVIRA:
Snoop anoda kunwa nekuputa uye ane kambani inonzi Eaze iyo inounza yekurapa w33d kune vanhu mudzimba dzavo. Snoop zvakare muridzi wemifananidzo yekugadzirisa uye yekugovana app Snoopify pamwe necheni dzemaresitorendi.
Iyo rap art ine akati wandei ma tatoo pamaoko ake. Izvo zvinosanganisira mufananidzo wemukadzi wake kurudyi bicep, mufananidzo wemumwe wake wekupedzisira Nate Dogg pahuma yake pamwe neyechidiki inozivikanwa art yemufananidzo kuruboshwe kwake bicep.
Nezve chitendero chake, Snoop Dogg akazvarwa uye akarerwa semuKristu. Muchokwadi, kuda kwake mimhanzi kwakasimudzirwa kukwaya yechechi kwaakaimba achiri mudiki asati atanga kubhinya kuchikoro chesekondari. Makore gare gare mu2009, zvakanzi Snoop aive nhengo yeRudzi rweIslam. Hazvina kutora nguva asati ataura kuti "akazvarwa patsva" muchikwata chekutenda chevaRasta.
Vongai nekuverenga kwedu Snoop Dogg Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kuti utibate!